Yan Aung: တံခါးမဲ့ နိုဝင်ဘာ...
စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာ ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ ဘဝအောင်မြင်တိုးတက်ရေးအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးစားနေဖို့ လိုအပ်သလို ရံဖန်ရံခါမှာလည်း ကိုယ်သွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်းလေးကနေ ဘေးကိုခဏဖောက်ထွက်ပြီး လာရာလမ်းကြောင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်တတ်ဖို့လည်း လိုအပ်တယ်တဲ့။ သိုးဆောင်းစကားနဲ့ ပြောရရင်တော့ Reflection Time ပေါ့။
လူတွေဟာ သိပ်ကို အောင်မြင်ထွန်းပေါက်နေချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ သတိမရတတ်ကြသလို သိပ်ကို စိတ်ဆင်းရဲအားငယ်နေချိန်တွေမှာလည်း ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွေ လုပ်ဖို့အတွက် ခွန်အားမပြည့်ဝတတ်ကြပြန်ဘူး။ သင့်တော်တဲ့ အချိန်မှာ သင့်တော်တဲ့ အတိုင်းအတာနဲ့ သင့်တော်စွာ ပြန်လည်သုံးသပ်တတ်ဖို့အတွက် သင့်တော်တဲ့ အားစိုက်မှုတစ်ခုတော့ ရှိသင့်တာအမှန်ပါပဲ။ ဒီ့အတွက် သင့်တော်တဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခုတော့လည်း လိုအပ်ပေလိမ့်ဦးမယ်။
ကျွန်တော့်အတွက်တော့ တစ်နှစ်မှာ လေးကြိမ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မဖြစ်မနေ ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ ကိုယ်တိုင်အကြံပြုထားတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ဒီဇင်ဘာ (၃၁) ရက်၊ ဇန်နဝါရီ (၂) ရက်၊ ဇူလိုင် (၄) ရက်နဲ့ နိုဝင်ဘာ (၈) ရက်တို့ပါပဲ။
ဒီဇင်ဘာ (၃၁) ရက်နေ့ကတော့ နှစ်ဟောင်းကုန်လို့ နှစ်သစ်ကို ကူးချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တင် မကဘူး၊ လူတိုင်းလိုလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနဲ့ ကိုယ်ရောက်ရှိနေတဲ့ အနေအထားကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဖြစ်ကြမယ့် အချိန်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ နှစ်ဟောင်းမှာ သင်ယူခဲ့ရတဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာတွေကို အခြေပြုပြီး နှစ်သစ်အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်အသစ်တွေ ချမှတ်တဲ့အခါမှာ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ အကုန်လုံးကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကတော့ မလွယ်လှပါဘူး။ လူတွေမှာ ဖြစ်ချင်တာတွေက အတော်များလှတာကိုး။
ချမှတ်ထားတဲ့ ဆောင်ရွက်ရန် အများစုထဲက တစ်ချို့တစ်လေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်ခဲ့ပြီး အဲဒီ့တစ်ချို့တစ်လေကလည်း ကိုယ့်အတွက် တကယ့်ကို အကျိုးများစေမယ့် အရာတွေ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန် တံခွန်နဲ့ ကုက္ကားပေပဲပေါ့။ ဒီဇင်ဘာ (၃၁) ရက် ညချမ်းတွေမှာ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ အတူတူ နှစ်သစ်ကို တပျော်တပါး ကြိုဆိုတတ်သလို ကျွန်တော့်ရဲ့ နှစ်ဟောင်းက လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်း ပြန်လည်သုံးသပ်ဖြစ်တယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ နှစ်သစ်အတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်အသစ်တွေကိုလည်း ချမှတ်ဖြစ်တယ်။
ဇန်နဝါရီ (၂) ရက်ကတော့ ဖခင်ကြီး ဆုံးပါးသွားခဲ့တဲ့ နေ့တစ်နေ့အဖြစ် ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ မှတ်မှတ်ရရ ရှိနေခဲ့တုန်းပဲ။ အဲဒီ့နေ့ကိုရောက်တိုင်း ကျွန်တော့်ကို ချစ်ခင်ယုံကြည်တဲ့ ဖခင်ကြီးအကြောင်း တစ်ိမ့်စိမ့်တွေးပြီး တိတ်ဆိတ်တဲ့ နေရာလေးတစ်ခုမှာ ကျွန်တော်စာရေးချင်ရေးတယ်။ ဒါမှမဟုတ် မြစ်ကမ်းစပ်နားလေးမှာ ထိုင်ပြီး ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ မြင်နေရတဲ့ ထုထည်ကြီးမားတဲ့ သဘောင်္ကြီးတွေကို အမျိုးအမည်မဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့အတူ ငေးကြည့်ချင် ကြည့်နေတတ်တယ်။ ဖခင်ကြီးမျှော်မှန်းခဲ့တဲ့ ဘဝပန်းတိုင်နဲ့ ကျွန်တော်လက်တွေ့ လျှောက်လှမ်းနေခဲ့ရတဲ့ ဘဝလမ်းကြောင်း ဘယ်လောက်များ နီးစပ်မှုရှိလဲ။ ဖခင်ကြီးဖြစ်စေချင်ခဲ့တဲ့ လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးနဲ့ ကျွန်တော်လက်ရှိ ပြုစုပျိုးထောင်နေတဲ့ လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ဘယ်လောက်များ တိုက်ဆိုင်မှုရှိလဲ။ ဒါတွေတင်မကဘဲ ကျွန်တော့်အပေါ် ဂရုစိုက် သွန်သင်ခဲ့ပေးတဲ့ ဖခင်ကြီးအကြောင်းကို တခုတ်တရ တွေးတောပြီး စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေကို ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်တာ ဇန်နဝါရီ (၂) ရက် ညနေချမ်းတွေပေါ့။
ဇူလိုင် (၄) ရက်နေ့မှာ ကျွန်တော့်မိခင်ကို မွေးဖွားခဲ့တယ်။ အမေဟာ ပဲနွယ်ကုန်းဆိုတဲ့ အညာမြို့လေးတစ်မြို့က မထင်မရှား ကျေးတောသူမလေး တစ်ယောက်။ အဖေနဲ့ အကြောင်းပါပြီး အဖေတာဝန်ကျရာ မြို့ရွာပြည်နယ်တွေမှာ လျှောက်နောက်ဆံထုံးပါခဲ့ရင်း မိသားစုလေးတစ်ခုကို ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့တယ်။ အမေ ပညာတွေ အများကြီးမတတ်၊ နားဝင်ချို စကားတွေလည်း မဆိုတတ်ပေမယ့် ကျွန်တော့်အပေါ် ယုံကြည်ကိုးစားစိတ် ကြီးမားတယ်။ တစ်ခြားဘယ်သူမှ မလုပ်နိုင်ရင်နေ၊ ငါ့သားလုပ်ရင် ရတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ် အမေ့မှာ ရှိတယ်။ ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိကြောင်းကိုလည်း ကျွန်တော့်ကို အခါအားလျော်စွာ ဂုဏ်ယူပြောပြလေ့ရှိတယ်။ တစ်ချို့ကိစ္စရပ်တွေ ကျွန်တော်လက်မလျှော့တမ်း ကြိုးစားဖြစ်ခဲ့တာ အမေ့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကို ကျွန်တော်မက်မောစွာနဲ့ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ချင်လို့လည်း ပါတယ်။ ဒီရက်လေးကိုရောက်တိုင်း ကျွန်တော့်အပေါ် ချစ်ခင်ကိုးစားတဲ့ အမေ့မေတ္တာအကြောင်း လေးလေးနက်နက် တွေးတောမိသလို အမေ့အပေါ် ကျွန်တော် တာဝန်ပျက်ကွက်မှုတွေ ရှိမရှိကိုလည်း ပြန်လည်သုံးသပ် ဆင်ခြင်မိတယ်။
နိုဝင်ဘာ (၈) ရက်နေ့ကတော့ ဒီလူ့လောကကြီးထဲကို ကျွန်တော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရ နေ့ရက်လေးတစ်ခုပေါ့။ ဒီရက်လေးကိုရောက်တိုင်း ကျွန်တော့်ကို ချစ်ခင်တဲ့၊ ကျွန်တော်ကချစ်ခင်တဲ့ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း မိသားစုဝင်တွေကို သူတို့နှစ်သက်မယ့် အစားအသောက်လေးတွေ ဝယ်ကျွေးလေ့ရှိတယ်။ တူ၊ တူမလေးတွေအတွက် ရွှေပုစွန်ရေခဲမုန့်၊ အမေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေအတွက် ကြက်သားချိုချဉ်ကြော်နဲ့ ခေါက်ဆွဲကြော်၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေအတွက် ထမင်းတစ်ဝိုင်း၊ လက်ဖက်ရည်တစ်ဝိုင်း စသည်ဖြင့်ပေါ့။ မြန်မာပြည်က ထွက်ခွာလာခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျွန်တော့်မွေးနေ့ပွဲလေးဟာ အိမ်က ခေါ်လာတဲ့ ဖုန်း၊ မိတ်ဆွေတွေ ပို့ပေးတဲ့ မွေးနေ့ကတ်ပြားနဲ့ ဆုတောင်းစာလေးတွေ၊ အီးမေးလ်လေးတွေနဲ့ပဲ ရိုးရှင်းစွာ ဖြတ်သန်းကုန်ဆုံးဖြစ်တော့တယ်။
နိုဝင်ဘာ (၈) ရက်မှာ တွေးဖြစ်တဲ့ အတွေးတွေကတော့ ပုံစံတစ်မျိုး ဆန်းနေတတ်တယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစေမယ့် အတွေးမျိုးတွေပါပဲ။ ကိုယ့်မွေးနေ့ဆိုတော့ ကိုယ့်ကို ဂရုတစိုက် သတိတရရှိနေခြင်း ခံရတာကို နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မိတဲ့ ခံစားချက်ကလည်း ကဲနေတာပေါ့လေ။ ဒီနေ့ကိုရောက်ရင် ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေနဲ့အတူ ကိုယ်ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေအကြောင်းကို ပိုပြီးတော့ အသားပေး တွေးတောဆင်ခြင်မိတယ်။ ကိုယ့်ယုံကြည်မှုကို ပိုပြီးမီးထိုးပေးရုံသာမကဘဲ ကိုယ်လုပ်ချင်နေတဲ့ အရာတွေကို ပိုလုပ်ဖြစ်ဖို့လည်း တွန်းအားပေးဖြစ်တယ်။ တကယ်တော့ နိုဝင်ဘာ (၈) ရက်ဟာ ကျွန်တော့်အတ္တတွေ မင်းမူကြီးစိုးတဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါပဲ။
ဒီနှစ်ရဲ့ နိုဝင်ဘာ (၈) ရက်မှာတော့ ဒီဇင်ဘာ (၃၁) ရက်၊ ဇန်နဝါရီ (၂) ရက်နဲ့ ဇူလိုင် (၄) ရက်ကို ဧည့်သည်တော်တွေ အဖြစ် ဖိတ်ထားခဲ့တယ်။
ဒီတစ်ညတော့ ကျွန်တော် တိတ်တိတ်လေးနေချင်တယ်။ ကျွန်တော် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့ မိုင်တိုင်တွေကို အတွေးရပ်ဝန်းထဲမှာ ပြန်စီစဉ်လို့ ငြိမ်ငြိမ်ဆိတ်ဆိတ်လေး တွေးတောနေချင်တယ်။
ဝင်လာမယ်ဆိုရင်လည်း ခြေသံဖွဖွလေးပဲ နင်းလာခဲ့ပါ။ တံခါးပိတ်ထားမလားလို့တော့ စိတ်မပူနဲ့နော်။
ကျွန်တော့်ကို ချစ်သူခင်သူတွေအတွက် ဒီနေရာလေးဟာ တံခါးလည်းမရှိ ဓားလည်းမရှိ ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းများနဲ့သာ ပကတိ…
နိုဝင်ဘာ (၈) ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်။ ။
မောင်လေးရန်အောင် မွေးနေ့မှာ အစစအရာရာ လိုအင်ဆန္ဒမှန်သမျှပြည့်ဝပါစေ၊
လောကီ လောကုတ္တရာ နှစ်ဖြာသောအကျိုးကို မပင်မပန်း ရွက်ဆောင်နိူင်သောသူ၊ မိမိခန္ဓာဝန်ကို ချမ်းသာစွာ ထမ်းဆောင်နိူင်သောသူ ဖြစ်ပါစေလို့... ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော်
ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့များစွာကို ပိုင်ဆိုင်ပါစေ...
ခြေသံဖွဖွလေးနဲ့ဘဲသူရောက်လာမှာပါ။ နောက်နှစ်ရဲ့ မွေးနေ့ကတ် :))
အသက်တွေက တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် ကြီးလာတာကို မွေးနေ့ရောက်မှ ကျွန်မတို့ သတိပြုမိကြတယ်နော်။ ဒါပေမယ့် ဖြတ်သန်းကုန်လွန်
ခဲ့တဲ့ ရက်တွေကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ထိုက်သင့်တဲ့ ကျေနပ်စရာတွေအတွက် ကျွန်မတို့ ပျော်ရွှင်ကြရပါတယ်။
နောင်မွေးနေ့ရက်ပေါင်း ရာထောင်ချီတိုင်အောင် စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါ၊ လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝပါစေ။
>မချစ်ကြည်အေး၊ မအိမ့်ချမ်းမြေ့၊ လရိပ်အိပ်၊ မမြသွေးနီ...
ကျေးဇူး ကျေးဇူး ကျေးဇူး ကျေးဇူး
အခုမှ ရောက်လာဖြစ်တော့ တိတ်တိတ်လေး နစ်ဝင်ချင်နေခဲ့တဲ့ အတွေးရပ်ဝန်းကနေတောင် ထွက်လာခဲ့ လောက်ပြီလား မသိဘူး၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သိုးဆောင်းစကား Better late than never အတိုင်း ပေါ့ဗျာ...၊း)
Happy belated birthday bro.....!!! May all your dreams come true..!!!